Vacos Baby Monitor, falanqaynta iyo waxqabadka | Wararka Gadget
Vacos Baby Monitor, falanqayn iyo waxqabad
Rafa Rodríguez Ballesteros | 01/09/2021 20:00 | La cusbooneysiiyay 31/08/2021 23:50 | Reviews
Waxaan ku soo laabanay Actualidad Gadget dib u eegista qoyska, gaar ahaan qoysaska dhallaanka ah. Farsamadu waxay noo soo gashay nolosheenna si ay noogu fududaato. IYO Waalidiinta carruurta ku leh guriga, kaalmo kasta waa yar tahay. Maanta waxaan ka hadlaynaa Kormeeraha Ilmaha ee Maran, kamarad qaali ah si aan loo lumin faahfaahinta kan ugu yar ee guriga.
Waxaa jira fursado aan dhammaad lahayn oo suuqa ah markaad raadineyso kaameeraha ilaaliyaha ilmaha. Maanta Waxaan dhammaan kaaga sheegeynaa soo jeedinta Vacos. Kaamiro amni oo dhammaystiran oo loogu talagalay ku xakamee dhallaanka fiidiyaha, maqalka, aragga habeenkii iyo waxyaabo kaloo badan marka loo eego kuwa kale oo awood u leh inay bixiyaan.
1 Vacos Baby Monitor, ilmahaagu waa ammaan
2 Unboxing Vacos Monitor Baby
3 Naqshadda kamaradda iyo shaashadda
4.1 Wax walba gacanta lagu hayo "
5 Faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka Vacos Baby Monitor
Vacos Baby Monitor, ilmahaagu waa ammaan
Raadinta muuqaalka jirka, Vacos Baby Monitor camera, waa la mid ah kaamirooyinka kale ee amniga in aan awoodnay inaan caddeynno. Kaamirooyinka waxaa loogu talagalay nooc kale oo ilaalin ah, sida guryaheena ama meheradaheena. Inkastoo haddii aan eegno Faa'iidooyinka ay leedahay, waxaan ka helnaa kala duwanaansho muhiim ah. Kani ma kormeeraha ilmaha ee aad raadinaysay? Qabsoo Kormeeraha Ilmaha ee Maran bogga rasmiga ah ee qiimaha ugu fiican.
Waxaan dhihi karnaa waxay ku kala duwan tahay inta aan helno fiidyow wareeg ah oo xiran maadaama aan haysanno gudbiyaha fiidiyaha, kaameradda, iyo qaataha signal -ka, sida shaashadda, meesha ay joogaan kontaroolada lagama maarmaanka u ah qaabeynta iyo adeegsiga. A 100% wareeg ammaan ah oo ka xor ah hacks.
Unboxing Vacos Monitor Baby
Hadda waa waqtigii la fiirin lahaa sanduuqa sanduuqan ilma -haynta “kit”. Sidaan hore u soo aragnay, waxaynu helaynaa laba qodob oo waaweyn sida kamarada fiidiyowga lafteeda, oo caddaan ah oo ka samaysan caag leh dhaldhalaal dhalaalaya. Iyo la soco shaashadda iyo badhamada xakamaynta.
Waxaan sidoo kale haynaa waxyaabo kale oo aasaasi u ah isticmaalka sida cabsi. Waxaan leenahay fiilo hadda loogu talagalay kamarada, iyo mid kale si loogu dallaco batteriga kormeere. Labadaba leh Qaabka USB Type-C. Sidoo kale laba adaptarada korontada mid kasta oo ka mid ah fiilooyinka.
Halkan ka dalbo Kormeeraha Ilmaha ee Maran qiimaha ugu fiican websaydhka rasmiga ah
Ugu dambayn, waxaan helnaa a qalab dheeraad ah oo loo isticmaali doono in lagu xiro kamarada fiidiyowga derbiga u jihaysan halka ay nagu habboon tahay. Carruurta yaryar faahfaahinta qurxinta ee kaamerada siisa muuqaal u eg ilmo in aan dul saari karno dusheeda; laba lammaane oo geeso casaan iyo huruud ah. Iyo sida had iyo jeer, a hagaha isticmaalaha yar iyo dukumintiga dammaanadda ee sheyga.
Naqshadda kamaradda iyo shaashadda
Sidii aan faallo uga bixinnay, kamaradda ayaa si fiican loo daaweyn karaa mid ka mid ah kamaradaha ilaalada ee aan awoodnay inaan tijaabino. Waxay leedahay a saldhig cylindrical ah oo qayb kale oo wareegsan ay ku dul taal kaas oo muraayaddu isku dhafan tahay. Laakiin weli, waan helnaa walxaha kala sooca, sida anteenada, ama suurtogalnimada in lagu shaqsiyeeyo qaar ka mid ah qalabka wax lagu qurxiyo ee ku jira sanduuqa.
Kala xisaabtan makarafoon iyo waliba af -hayeen, sidaa darteed waa lagu qalabeeyay dhawaaqa labada dhinac ah. Shaki la'aan aad bay faa'iido u leedahay in la awoodo in lala xiriiri karo ilmaha mar walba haddii uu soo tooso ama haddii aan rabno inaan ku hadalno cod baahiyaha si aan u dejinno. Muraayaduhu waxay muujinayaan qaraarka HD 720P iyo leh aragti habeen aad u fiican kaas oo bixiya sawirro fiiqan iftiin kasta, ama gebi ahaanba maqan.
El Kormeerka ee koontaroola kaameeradu waxay leedahay a 5 shaashad LCD ah. Dhinaca hore, a la derecha shaashadda, waxaan ka helnaa badhamada jirka kuwaas oo u adeega xakamaynta isticmaalkooda.
In gadaal, oo lagu daray a baalasha indhaha waxa shaqeeya si aan kor ugu qaadno, waan helnaa anteeno si calaamaddu u soo baxdo oo loo helo si cad oo ka fiican. Dhinaca hoose leeyahay a booska kaarka xusuusta ilaa 256 MB oo xusuusta ah oo aan ku kaydin karno cajaladaha.
Waxaa la joogaa waqtigii aan kuu sheegi lahayn sababaha ugu waaweyn ee ka dhiga Vacos Baby Monitor tan ikhtiyaarka ugu fiican suuqa si ay go'aan uga gaaraan. Sidaan horeba kuugu sheegnay, naqshadeynta, inkasta oo ay isku mid yihiin kaamirada wax ilaalada ee “caadiga ah”, waa soo jiidasho leh, casri ah mana isku dhici doonto meel kasta.
Thanks to menu -ka kormeeraha waxaan si fudud u heli karnaa dhammaan kontaroolada lagama maarmaanka ah si aan uga faa'iideysanno isticmaalkiisa. Iyadoo leh badhanka tooska ah, waan awoodnaa awood u yeelo ama naafo kamarada, ama makarafoonka si aad ula hadasho ilmaha ama aad u awoodo inaad maqasho haddii ilmuhu ooynayo. Iyada oo leh badhamada aagga dhexe waxaan u wareejin karnaa kamaradda illaa 355 digrii oo waxaan ku dhaqaajin karnaa illaa 55 digrii oo foorari. Waxaan sidoo kale ku soo dhaweyn karnaa sawirka badhanka dhexe oo leh 1,5X fogee ilaa 2X.
Waa wax aan suurtogal ahayn in la helo dhammaad dhintay oo Vacos Baby Monitor aanu is -diiwaangelin. Iyada oo la socota waxaan isku xiri karnaa ilaa 4 kamaradood oo kala duwan in aan sidaas oo kale u xakamayn karno. Markaa waxaan yeelan doonnaa sawirro gees kasta oo qolka hurdada ah ee qolka aan dooneyno inaan ku rakibno. Dhammaan amniga aad ka raadineyso aalad, iyo intaas hadda waad iibsan kartaa bogga rasmiga ah.
Wax walba gacanta lagu hayo "
Dareemayaal kaas oo kaamiradu leedahay ka dhig mid aad u sii dhammaystiran oo shaqeynaya 100% si aad noo siiso khibrad dhammaystiran. Waxaan leenahay a qalabka dhaqdhaqaaqa taas oo ka dhigi doonta kormeeraha inuu soo tooso oo aan aragno haddii ilmuhu soo toosay ama uu iska socdo inta lagu jiro hurdada. Sidaas oo kale, dareeraha dhawaaqa ayaa kicin doonta kaamirada oo la socon doonta haddii ilmuhu ooyo.
Mid ka mid ah dareemayaal sameeya Vacos Baby Monitor oo ka duwan inta kale ee beddelka ah waa heerkulka. Kaamiradu waxay awood u leedahay inay na siiso macluumaad ku saabsan heerkulka qolka. Habkan waxaan ku ogaan doonnaa hab fudud haddii ay lagama maarmaan tahay in la dhigo kuleyl ama liddi, in heerkulku sarreeyo.
Vacos Baby Monitor wuxuu leeyahay suurtogalnimada in la duubo sawirrada. Kaliya maahan inay na siiso toos u tabin, haddii aan rabno, waxaan soo bandhigi karnaa a Kaarka Micro SD ilaa 256MB si loo kaydiyo fiidiyaha. Waxaan yeelan doonnaa calaamad cad oo aan la jarin oo leh a masaafada ilaa 300 mitir laga bilaabo kamarada ilaa kormeeraha, waxaan ku wareegi karnaa guriga dhibaato la'aan.
Faahfaahin muhiim ah ayaa ah in Vacos Baby Monitor uma baahnid casriga, sidaa darteed kuma khasbanaan doonno inaan rakibno codsiyada. Midkoodna xiriir internet lama huraan ah si loo isticmaalo, signalada kaameeradu soo saarto ayaa kaliya lagu ogaadaa kormeeraha laftiisa. Iyadoo aan lahayn Apps ama internet, sawiradeenu waa ka madax bannaan yihiin haakaris.
Faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka Vacos Baby Monitor
El Cabbirka shaashadda 5 inji iyo qaraarka 720p
Fudayd de Isticmaal laga bilaabo daqiiqaddii ugu horreysay iyo is -beddellada xulashooyinka
Sensors, dhawaaqa, dhaqdhaqaaqa iyo heerkulka
Aad u fudud in la isticmaalo
Internet la'aan marmar dhismaha guriga dhigi karo waxoogaa caqabad ah
Qiimaha ka sarreeya celceliska
Wifi ma jiro
Kormeeraha Ilmaha ee Maran
Dib u eegida: Rafa Rodríguez Ballesteros
Ku dhejiyay: 1 September ee 2021
Wax ka badalidii ugu dambeysay: 31 August 2021
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Reviews » Vacos Baby Monitor, falanqayn iyo waxqabad
Kiiboodhka 'HyperX Alloy Core keyboard' iyo jiirka 'Pulsefire Core', saaxiibbada ciyaarta kaamil ah [SWEEPSTAKES]
Philips wuxuu ka dhigayaa nalalka Hue qoob ka ciyaarka codka Spotify